निर्मला हत्या प्रकरणः अम्बाको बोट जो ढल्यो ! - Purbeli News
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र १०, २०७५ समय: ७:१९:४१
निर्मलाको मृत शरीर उखुबारीमा फेला प-यो । उनको शरीर भिजेको थियो । एउटा चप्पल पनि त्यही भेटियो । सँगै भेटियो, उनले कोठाबाट लिएर गएको बिज्ञान बिषयको पुस्तक । घटना भएको भनिएको रात मुसलधारे पानी परेको छ । तर, पुस्तक भिज्न सकेको छैन । मृत भेटिएकी निर्माणको शरिर पुरै पानीले भिज्नु तर, पुस्तक नभिज्नु कसरी हुन सक्यो ?
कतै पुस्तक पछि लगेर फालिएको त होइन ? यस तर्फ प्रहरीको अनुसन्धान केन्द्रीत भएन । –निर्मालाको शवसँगै अम्बाका केही दाना पनि वरामद भए । प्रहरीले मुलुल्कामा अम्बा भेटिए पनि उल्लेख गर्यो । घटना भएको केही दिनपछि अम्बाको प्रसंग उठ्यो । यस बिषयमा प्रहरीले बबितासँग सोधपुछ गर्यो । हाम्रो घरमा अम्बाको झाङ थियो ।
त्यहीँबाट टिपेर उसलाई दिएको बताइन् । तर, बबिताको घरमा घटना भएको ६ दिनपछि अम्बाको झाङ काटेर मिल्काई सकिएको छ । उक्त अम्बाको झाङ एकाएक किन काटियो ? प्रहरीको अनुसन्धान यस तर्फ पनि मोडिएन । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा खबर रहेकाे छ ।
आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ आश्विन १० गते बुधबार
धनकुटाका कोखमानले गरे दुनियाँ चकित पार्ने यस्ताे आविस्कार [सम्मान स्वरुप सेयर गरोँ]
देशकै तेस्रो कुरी बजारदेखि कालीञ्चोक मन्दिरसम्म केबुलकारको सफल परीक्षण
सामुदायिक वनले ग-यो क्षमता अभिवृद्धि तालिम
प्रसुती केन्द्रमा पहिलो आमा बन्ने रेणुकाले पाईन १० हजार
लायन्स क्लव इन्द्रपुर तथा बेलवारीको पदस्थापन
नेपालद्वारा चीन पराजित : सेमिफाइनलको आशा
पूर्वकाे टुरमा कन्दरा
चलचित्र अनुरागको प्रमोशन लागि एलिजा इटहरीमा